'सिक्वेलमा डबल डोज' भट्टराई
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख २६, २०७६१२:५९
फिल्म । जात्राको सफलतापछी बनाइएको फिल्म हो ‘जात्रै जात्रा’ । आउँदो जेठ ३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने यो फिल्ममा पहिलो भागको कथालाई अगाडी बढाईएको छ । त्यसो त सार्वजनिक ट्रेलरमा दर्शकले आश गरिएको भन्दा भिन्न कथालाई देखि रहेका छन् । पहिलो भाग मार्फत २ करोड ८० लाख रुपैया के भयो ? भन्ने कौतुहलता बनाउन सफल टिमले ट्रेलरमा सुन काण्डलाई समेटेको छ । के यो कथा वस्तु नै नयाँ हो त ? निर्देशक तथा लेखक प्रदीप भट्टराई यसलाई जात्रामा जात्रै जात्रा गरिएको बताउछन ।
‘हामीले दर्शककै डिमाण्ड अनुसार फिल्मको सिक्वेल बनाउने सोच बनाएका हौ’ उनले भने ‘फिल्ममा पहिलेको कथालाई मात्र बढाएको भए जात्र हुन्थ्यो , हामीले जात्रै जात्रा गरेका छौ ।’ उनले कथामा नयाँ काण्ड ल्याएर दर्शकलाई बोनस दिएको बताए । ‘हामीले काण्ड भन्दा पनि उक्त परिवेशलाई समेटेका छौ’ उनले भने ‘त्यो परिवेशमा सामान्य ब्यक्ति पर्दा कस्तो अवस्थालाई पार गर्छन भन्ने देखाउने प्रयास गरेका छौ ।’ उनले आफुले कमेडी फिल्मको नाममा हसाउने शैली नअपनाएको पनि बताए । जात्रापछी निर्देशक भट्टराईले शत्रु गते निर्देशन गरेका थिए , जसलाई पनि दर्शकले निकै रुचाएका थिए ।
त्यसपछि उनि तेस्रो फिल्म जात्रै जात्रा लिएर दर्शक समू आउंदैछन् । उनले निर्देशकीय क्षमताबाट जात्रामा दर्शक मात्र होइन फिल्मकर्मी र समिक्षाको पनि मन जित्न सफल भएका थिए । त्यसैले पनि निर्देशक भट्टराईको लागि जात्राको सिक्वेलले पैसा कमाउने भन्दा पनि सांख बचाउने चुनौती मुख्य छ । फिल्ममा विपिन कार्की, दयाहाङ राई, रबिन्द्र झा, रबिन्द्र सिंह बाँनिया, बर्षा राउत , प्रियंका झा , राजाराम पौडेल लगायतका कलाकारहरुको पनि यसमा अभिनय छ । फिल्ममा शंकर महर्जन द्वन्द्व निर्देशन छ । निर्देशक भट्टराई आफैंको कथा रहेको फिल्ममा कालीप्रसाद बाँस्कोटा र कृष्ण भारद्वाजको संगीत छ ।
रील र रियल हाँस्यकलाकारको ‘सेल्फी’
‘यो भन्दा राम्रो डेब्यु मेरो हुने थिएन ‘
विधार्थीसँग ‘दि ब्रेकअप’ टिम